Simeone: Atletico Madrid Kuma Tartamayso Horyaalka
HomeWararka MaantaSimeone: Atletico Madrid Kuma Tartamayso Horyaalka
Tababaraha kooxda Atletico Madrid, Diego Simeone ayaa ka quustay rajadii ahayd in ay kooxdiisu difaacan karto horyaalka Spain ee La Liga kadib markii ay habeenkii xalay ka badin kari waayeen isla markaana barbar dhac 1-1 ah ay dhibacaha ku wadaageen Valencia.
Tababare Diego Simone ayaa warbaahinta u sheegay in aanu haba yaraatee ku doodi Karin in ay kooxdiisu tartan kula jirto kooxaha hore ee Barcelona iyo Real Madrid, laakiin sidii ay ugu soo bixi lahaayeen Champions League iyagoon isreeb-reeb soo gelin ay tahay yoolka kooxdiisa.
“Kuma siin karo cinwaanka ah in aanu wali ku tartamayno horyaalka, horyaalku waa uu dheer yahay laakiin waxa hadda meesha yaallaa waa kooxda tooska ugu soo baxaysa Champions League annaga iyo Valencia” sidaas ayuu yidhi Simeone.
Simeone waxa uu xusay in qaybtii hore ee ciyaarta ay kooxdiisu wanaagsanayd hase yeeshee qaybtii dambe laga wanaagsanaa.
Kooxda tababare Simeone ee Atletico Madrid ayaa waxa ay leedahay 55 dhibcood, waxaanay hal dhibic oo kaliya ka sarraysaa Valencia, taas oo labadooda kii dhibco bataa uu si toos ah ugu bixi doono Champions League, halka kooxda kale ee kaalinta afraad ka gasha horyaalka Spain ay is-reeb-reeb la soo geli doonto kooxo kale.
Arsenal Oo Cashar Lama Illaawaan Ah U Dhigtay Nottham Forest Iyo Goolashii Tirada Beelay
Tottenham Oo Arsenal Ugu Awood Sheegatay Ciyaartii North London Derby
Zidane Oo Xaqiijiyey In Real Madrid Ay Si dhow ula socoto Xaaladda Raheem Sterling